Nagu saabsan - Zhaofeng Technology Protection Technology Co., Ltd.
Shirkaddu waxay leedahay 159 shaqaale waqti-buuxa ah iyo 27 injineernimo iyo shaqaale farsamo.
Waxaan helnay tiro shahaadooyin heer AAA ah iyo shatiyada qaranka ee cusub!
Ganacsiga shirkaddu inta badan waxaa ka mid ah: naqshadeynta, wax soo saarka, rakibidda iyo iibinta qalabka FRP.
Hebei Zhaofeng Technology Protection Technology Co., Ltd. waxa uu ku yaalaa No. 396, Chunfeng South Street, Degmada Jizhou, Hengshui City, Gobolka Hebei, Shiinaha. Waxay ku taalaa saldhigga warshadaha walxaha isku jira ee Shiinaha. Ganacsiga shirkaddu inta badan waxaa ka mid ah: naqshadeynta, wax soo saarka, rakibidda iyo iibinta qalabka FRP.
Shirkaddu waxay hadda leedahay laba khad wax -soo -saar oo loogu talagalay tuubooyinka FRP iyo rakibidda, laba khad oo wax -soo -saarka oo loogu talagalay taangiyada kaydinta FRP, iyo sidoo kale taageeridda mashiinnada tijaabinta hidaha iyo qalabka tijaabada kiimikada iyo jirka. Noocyada badeecaddu waxay daboolayaan tuubooyinka FRP, rakibidda tuubooyinka FRP, weelasha FRP, weelasha isku -dhafan ee FRP, munaaradaha FRP, qalabka desulfurization ee FRP, demper korontada FRP (boor), iwm;
Tilmaamaha Wax -soo -saarka ugu Weyn Iyo Noocyada
DN15mm ～ DN4000mm waxaa loo isticmaalaa tuubooyinka ciidda FRP, dhuumaha geedi socodka kiimikada iyo tuubooyinka ka hortagga gumaarka ee biyo-gelinta magaalada, dheecaannada iyo nidaamyada miiridda biyaha badda;
Weelasha FRP ee DN600mm ～ DN25000mm iyo weelasha ka kooban sida FRP/PP, FRP/PVC, FRP/PVDF, iwm, habka wax -ka -beddelku wuxuu qaataa dabayl toosan ama leexasho toosan;
Waxaa loo adeegsaday nidaamka desulfurization gaaska qiiqa ee warshadda korontada, biibiilaha buufinta iyo biibiilaha wareegga slurry;
FRP munaaradaha maydhashada, munaaradaha qallajiya (munaaradaha xumbo, munaaradaha baakadaha leh), munaaradaha nuugista, munaaradaha sunta, iyo FRP/PP, FRP/PVC, FRP/PVDF munaaradaha isku dhafan iyo taxanaha kale ee alaabta munaarada;
Tilmaamo iyo tusaalooyin kala duwan oo ah munaaradaha qaboojinta ee FRP-ka buuxsamay, munaaradaha qaboojinta buufinta ee aan buuxin, fillers kala duwan, biraha, ururiyayaasha biyaha iyo qalabka kale ee loo isticmaalo qaboojiyaha munaaradaha, fiilooyinka muquuninta, marawaxadaha, tuubooyinka hawo-qaadista iyo alaabooyinka kale ee gacanta-dhigay iyo ka-hortagga daxalka mashaariicda dahaarka ；
Tube tube FRP, dembiga korontada ee FRP (boodh) qalabyo dhammaystiran, oo loo adeegsaday nadiifinta gaaska, defogging iyo ka qaadista boorka ee macdanta, kiimikada, batroolka iyo warshadaha kale, iyo sidoo kale nadiifinta gaaska qiiqa ee warshadaha ilaalinta deegaanka;
Qiiqa, taangiga afargeeslaha ah, daboolka dheriga aashitada hydrolysis, tiirka sarrifka ion, Johkasou, Venturi iyo alaabooyinka kale ee FRP-qaabeeya;
Shirkaddu waxay leedahay 159 shaqaale waqti-buuxa ah iyo 27 injineernimo iyo shaqaale farsamo. Iyada oo dadaallada firfircoon ee dhammaan shaqaalaha, shirkadu waxay si buuxda u gudubtay "Shahaadada Nidaamka Maareynta Tayada ISO9001, Shahaadada Nidaamka Maareynta Deegaanka ISO14001, iyo ISO45001 Shahaadada Nidaamka Maareynta Caafimaadka iyo Badbaadada Shaqada". Oo wuxuu helay tiro shahaadooyin heer AAA ah iyo shatiyo cusub oo qaran!
Shirkaddu waxay u hoggaansan tahay aragtida shirkadeed ee "ka caawinta dhaqaalaha inuu ka baxo, difaaca cirka buluugga ah iyo daruuraha cad", wuxuu dejiyaa dhaqan shirkadeed oo ah "fudud oo daacad ah, daacadnimo iyo aaminaad", wuxuu hirgeliyaa niyadda kooxda "dadka u janjeedha, tiknoolajiyadda adeegsiga, raadinta heer sare, iyo u hoggaansanaanta rabitaankii asalka ahaa ", waxaana ka go'an shirkadaha waaweyn iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Hore u soco!